H August 24, 2021
ရှာလေး တဈရှာမှာ လူနှဈယောကျဟာ အိမျနီးနားခငျြးတှေ အဖွဈ နထေိုငျကွတယျ ။ တဦးက လယျသမား ဖွဈပွီး နောကျတဈဦး ကတော့ မုဆိုးတယောကျ ဖွဈပါတယျ ။ လယျသမားဟာ သူနတေဲ့ အိမျကလေးမှာ ဘဲတှေ မှေးထားတယျ မုဆိုးကတော့ သူ့ခွံဝနျးထဲမှာ အမဲလိုကျခှေးတှေ မှေးမွူထား ခဲ့တယျ ။
မကွာခဏ ဆိုသလို အမဲလိုကျ ခှေးတှဟော လယျသမားရဲ့ ခွံထဲကို ဝငျရောကျပွီး လယျသမား မှေးထားတဲ့ ဘဲတှကေို သတျဖွတျ စားသောကျလေ့ ရှိကွတယျ ။ အဲဒါနဲ့ လယျသမားက မုဆိုးဆီသှားပွီး အမဲလိုကျခှေးတှကေို ထိမျးသိမျးထားဖို့နဲ့ လှတျမထားဖို့ အကွိမျကွိမျ တောငျးဆိုခဲ့တယျ ။
ဒါပမေယျ့ မုဆိုးဟာ နမွေဲအတိုငျး နပွေီး ခှေးတှကေို ဒီအတိုငျး လှတျထား ခဲ့တယျ ။ နောကျဆုံးတော့ လယျသမားလညျး လုံးဝကို သညျးမခံနိုငျတော့ပဲ ရှာမှာရှိတဲ့ အကွီးအကဲဆီ သှားပွီး မုဆိုးရဲ့ ခှေးတှကေို အရေးယူပေးဖို့ တောငျးဆို ခဲ့ပါတယျ ။
လယျသမားရဲ့ ပွောကွားခကျြကို ကွားပွီးတော့ အသိပညာနဲ့ ပွညျ့စုံတဲ့ အကွီးအကဲက အောကျပါ အတိုငျးပွောတယျ ။
“ အဲဒီ မုဆိုးကို ကြုပျ အရေးယူပေးလို့ ရပါတယျ.. ခှေးတှကေိုလညျး ခြုပျနှောငျထားဖို့ အမိနျ့ပေးလို့ ရပါတယျ ၊ အဲဒီလို လုပျလိုကျမယျ ဆိုရငျ ခငျမြားမှာ မိတျဆှကေောငျး အိမျနီးနားခငျြး တဈယောကျ ဆုံးရှုံးသှားနိုငျ ပါတယျ.. ခငျဗြားနဲ့ အတူ နထေိုငျရမယျ့ အိမျနီးနားခငျြးကို ရနျသူ ဖွဈစခေငျြသလား မိတျဆှေ ဖွဈစခေငျြ ပါသလား ”
လယျသမားဟာ တဈခကျြ စဉျးစားလိုကျပွီး “ မိတျဆှပေဲဖွဈ ခငျြပါတယျ ” လို့ ဖွလေိုကျတယျ ။ အဲဒီအခါ အကွီးအကဲက ဆကျပွောတယျ ။
“ ကောငျးပါပွီ ဒါဆို ကြုပျအကွံ တဈခု ပေးပါ့မယျ ဘဲတှေ မဆုံးရှုံးစရေလို မိတျဆှေ တဈယောကျ တိုးလာ ပါလိမျ့မယျ ”
လယျသမားက အကွီးအကဲ ပွောတဲ့အတိုငျး အိမျကို ပွနျသှားတယျ ။ ပွီးတော့ အိမျမှာ မှေးထားတဲ့ ဘဲတှထေဲက အလှဆုံး ဘဲ ၄ ကောငျကို ရှေးပွီး မုဆိုးရဲ့ သား လေးယောကျကို လကျဆောငျ အဖွဈ ပေးလိုကျတယျ ။
လကျဆောငျရတဲ့ ဘဲလေးတှနေဲ့ နတေို့ငျး ပြျောရှငျစှာ ဆော့ကစားနတေဲ့ သားလေးယောကျကို တှတေဲ့အခါ မုဆိုးဟာ နတေို့ငျး ဝမျးသာ ကွညျနူးနရေတယျ ။ ပွီးတော့ သားလေးတှေ လကျဆောငျ ရထားတဲ့ ဘဲတှကေို ကိုကျစားမှာ စိုးလို့ အမဲလိုကျခှေး တှကေို သခြော လှောငျထားလိုကျ ပါတော့တယျ ။
လယျသမားကိုလညျး ကြေးဇူးတှေ တငျပွီး အမဲလိုကျလို့ ပွနျလာတဲ့အခါ အသားတှကေို ဝငှေပေးတတျ လာပါတယျ ။ လယျသမားကလညျး ခွံထှကျ သီးနှံတှနေဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ ဘဲဥတှကေို လကျဆောငျ အဖွဈ မုဆိုးကို ပေးခဲ့တယျ ။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့နှဈဦးဟာ အိမျနီးခငျြးကောငျးတှေ ဖွဈလာကွ ပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့.. ကိုယျဖွဈခငျြတာ တဈခုတညျးကိုပဲ ဦးစားမပေးပါနဲ့ ။ သူ့ဖကျကိုလညျး စာနာပွီး ဦးစားပေးတတျ မှသာ ရနျသူဘဝကနေ မိတျဆှေ ဖွဈသှားနိုငျ တာပါ ။
သငျရော.. ရနျသူလိုခငျြတာလား ? မိတျဆှလေိုခငျြတာလား ? ။
ရွာလေး တစ်ရွာမှာ လူနှစ်ယောက်ဟာ အိမ်နီးနားချင်းတွေ အဖြစ် နေထိုင်ကြတယ် ။ တဦးက လယ်သမား ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ဦး ကတော့ မုဆိုးတယောက် ဖြစ်ပါတယ် ။ လယ်သမားဟာ သူနေတဲ့ အိမ်ကလေးမှာ ဘဲတွေ မွေးထားတယ် မုဆိုးကတော့ သူ့ခြံဝန်းထဲမှာ အမဲလိုက်ခွေးတွေ မွေးမြူထား ခဲ့တယ် ။
မကြာခဏ ဆိုသလို အမဲလိုက်ခွေးတွေဟာ လယ်သမားရဲ့ ခြံထဲကို ဝင်ရောက်ပြီး လယ်သမား မွေးထားတဲ့ ဘဲတွေကို သတ်ဖြတ် စားသောက်လေ့ ရှိကြတယ် ။
အဲဒါနဲ့ လယ်သမားက မုဆိုးဆီသွားပြီး အမဲလိုက်ခွေးတွေကို ထိမ်းသိမ်းထားဖို့နဲ့ လွှတ်မထားဖို့ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် မုဆိုးဟာ နေမြဲအတိုင်း နေပြီး ခွေးတွေကို ဒီအတိုင်း လွှတ်ထား ခဲ့တယ် ။ နောက်ဆုံးတော့ လယ်သမားလည်း လုံးဝကို သည်းမခံနိုင်တော့ပဲ ရွာမှာရှိတဲ့ အကြီးအကဲဆီ သွားပြီး မုဆိုးရဲ့ ခွေးတွေကို အရေးယူပေးဖို့ တောင်းဆို ခဲ့ပါတယ် ။
လယ်သမားရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ကြားပြီးတော့ အသိပညာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ အကြီးအကဲက အောက်ပါ အတိုင်းပြောတယ် ။
“ အဲဒီ မုဆိုးကို ကျုပ် အရေးယူပေးလို့ ရပါတယ်.. ခွေးတွေကိုလည်း ချုပ်နှောင်ထားဖို့ အမိန့်ပေးလို့ ရပါတယ် ၊ အဲဒီလို လုပ်လိုက်မယ် ဆိုရင် ခင်များမှာ မိတ်ဆွေကောင်း အိမ်နီးနားချင်း တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားနိုင် ပါတယ်.. ခင်ဗျားနဲ့ အတူ နေထိုင်ရမယ့် အိမ်နီးနားချင်းကို ရန်သူ ဖြစ်စေချင်သလား မိတ်ဆွေ ဖြစ်စေချင် ပါသလား ”
လယ်သမားဟာ တစ်ချက် စဉ်းစားလိုက်ပြီး “ မိတ်ဆွေပဲဖြစ် ချင်ပါတယ် ” လို့ ဖြေလိုက်တယ် ။ အဲဒီအခါ အကြီးအကဲက ဆက်ပြောတယ် ။
“ ကောင်းပါပြီ ဒါဆို ကျုပ်အကြံ တစ်ခု ပေးပါ့မယ် ဘဲတွေ မဆုံးရှုံးစေရလို မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် တိုးလာ ပါလိမ့်မယ် ”
လယ်သမားက အကြီးအကဲ ပြောတဲ့အတိုင်း အိမ်ကို ပြန်သွားတယ် ။ ပြီးတော့ အိမ်မှာ မွေးထားတဲ့ ဘဲတွေထဲက အလှဆုံး ဘဲ ၄ ကောင်ကို ရွေးပြီး မုဆိုးရဲ့ သား လေးယောက်ကို လက်ဆောင် အဖြစ် ပေးလိုက်တယ် ။
လက်ဆောင်ရတဲ့ ဘဲလေးတွေနဲ့ နေ့တိုင်း ပျော်ရွှင်စွာ ဆော့ကစားနေတဲ့ သားလေးယောက်ကို တွေ့တဲ့အခါ မုဆိုးဟာ နေ့တိုင်း ဝမ်းသာ ကြည်နူးနေရတယ် ။ ပြီးတော့ သားလေးတွေ လက်ဆောင် ရထားတဲ့ ဘဲတွေကို ကိုက်စားမှာ စိုးလို့ အမဲလိုက်ခွေး တွေကို သေချာ လှောင်ထားလိုက် ပါတော့တယ် ။
လယ်သမားကိုလည်း ကျေးဇူးတွေ တင်ပြီး အမဲလိုက်လို့ ပြန်လာတဲ့အခါ အသားတွေကို ဝေငှပေးတတ် လာပါတယ် ။ လယ်သမားကလည်း ခြံထွက် သီးနှံတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ဘဲဥတွေကို လက်ဆောင် အဖြစ် မုဆိုးကို ပေးခဲ့တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့နှစ်ဦးဟာ အိမ်နီးချင်းကောင်းတွေ ဖြစ်လာကြ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့်.. ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ တစ်ခုတည်းကိုပဲ ဦးစားမပေးပါနဲ့ ။ သူ့ဖက်ကိုလည်း စာနာပြီး ဦးစားပေးတတ် မှသာ ရန်သူဘဝကနေ မိတ်ဆွေ ဖြစ်သွားနိုင် တာပါ ။
သင်ရော.. ရန်သူလိုချင်တာလား ? မိတ်ဆွေလိုချင်တာလား ? ။